बालकृष्णको गलामा माला, आमाको आँखामा आँसु
काठमाडौं । न्यायाधीशको खाल उतार्ने चर्को भाषण गर्ने वालकृष्ण ढुंगेललाई राम्रो चालचलन देखाएको भन्दै सरकारले रिहा गरिदियो । उनी रिहा भएपछि २०५५ असार १० गते मारिएका उज्जन कुमार श्रेष्ठकी ८३ वर्षीय आमा रामकुमारी धरधरी रोइन् । उनको प्रश्न छ– न्याय खोज्न कहाँ जाउँ । राज्यले जे गरे पनि हुन्छ ?
कसरी खप्ने ? सरकारले काम गर्‍यो कि नकाम गर्‍यो, जिम्मेवार सरकार नै छ । कानुनविददेखि स्वयम् नेकपाका नेता कार्यकर्ता सरकारले यस्तो निर्णय गरिहाल्नु हुन्थेन भन्छन् तर दुई तिहाईको सरकारलाई कसले रोक्ने ? ओली र प्रचण्डको जोडी यतिबेला जस्तो सुकै निर्णय गर्नसक्ने जनबलसहितका जंगे जो बनेका छन् ।
यी बुढी आमा रामकुमारीको माँग छ– कैद माफी दिनेले देखाइदिउन्– मेरा छोराहरुको गल्ती के थियो र मारियो, न्याय खोज्ने ठाउँ देखाइदिनोस्, हामी त्यहीँ जान्छौं । एउटा छोरा सामान लिन बजार गएको थियो, मारियो, अर्को धानको बिटो लाउँदा लाउँदै मारियो । नेपालमा न्याय हरायो ।